FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELLADA GERANIUM EE GURIGA: KA KOOBAN KIIMIKADA IYO SIFOOYINKA DABIICIGA AH EE CAAFIMAADKA BINI'AADAMKA, IYO SIDOO KALE KHATARTA UBAXA OO AAD KU HAYSAN KARTAA AQALKA? - SOOSAARKA DALAGGA
Miyaan ku haysan karaa geraniums guriga? Faa'iidooyinka iyo waxyeellada ubaxa, iyo weliba qaababka daryeelka ee dhirta gudaha
Geranium waxaa kale oo loo yaqaannaa pelargonium. Tani waa xayawaan aan la qabin oo leh caano gaar ah oo caleemo ah, waxaa si gaar ah loogu dhawaaqaa marka la xoqo farahaaga.
Geranium waxaa loo tixgeliyaa bogsiiye dhab ah, ma aha oo kaliya inuu guriga ku qurxiyo ubaxiisa, laakiin sidoo kale wuxuu faa'iido u leeyahay nolol maalmeedka, sidoo kale wuxuu bogsashada guryaha. Read dheeraad ah ka badan ubax waa faa'iido leh iyo waxa waxyeelo keeni kartaa. Sida loo daryeelo warshad guriga.
Waxyaabaha kiimikada ee ubaxa
Qeybta sare ee wax badan oo ka mid ah:
fitamiin C, E iyo K;
Caleemaha waxay heleen geranin tannin gaar ah, kuwaas oo hantidooda weli wax yar la baran.
Waxaa jira xidigo badan oo geranium ah:
Maxay faa'iido u leedahay guriga?
Udigeeda ursan ma istaagi karto duqsiyada, kaneecada, aboorada iyo cayayaanka kale. Haddii aadan haysan mid ka mid ah geranium guriga, laakiin dhowr, si fiican ujeedka xayawaan kasta, laakiin waxaa jiri doona kaneeco aad u yar oo daaqada furan. Waxay u celisaa cayayaanka waaweyn xittaa ka sii fiican.
Caleemaha Geranium waxaa lagu rasaaseeyn karaa xayawaanka guryaha haddii ay haystaan ​​boodada.
Xaashidu waxay ku jajaban tahay faraha, ku dhegsan dhegta ama bisad ama eey, waxay ka tirtiraysaa tuubada dhegta.
Geranium ee guriga ayaa nadiifiya hawada nijaasta waxyeellada leh iyo nasteexo.
Warshadani waxay nuugaysaa qoyaan ka badan hawada.
Hooyooyinka qaar ayaa isticmaala caleemo si ay u dhadhamiyaan suxuunta.
Dhuxulku wuxuu xoojiyaa nidaamka dareenka, waa waxtar u leh dadka qaba niyad-jabka, maadaama ay kor u qaadayso niyadda.
Haddii ilkuhu si lama filaan ah u xanuunsadaan, geranium ayaa kaa caawineysa, waxaad u baahan tahay inaad soo qaado caleen, miis oo ku soo dhejiso iliga cuncunka ah, xanuunka si dhaqso ah ayuu u dhimi doonaa. Sidoo kale, caleemaha geranium la ruxay, oo ku dhegta dhegta, waxay fududaynaysaa otis.
Cadaadis laga sameeyey caleemaha caleemaha ayaa caawin kara radikulitis.
Iyada oo adiguna, waxaad samayn kartaa aromaterapy dhab ah guriga ama si fudud u qaboojiya hawada qolka. Waa muhiim inaanad ka badneyn, ugu badnaan 4 dhibcood oo ku yaal laydhadhka arooska, iyo 2 dhibcood ayaa ku filan qol yar.
Tani waa mid ka mid ah saliidaha ugu muhiimsan ee loo isticmaalo in lagu baddalo xaaladda dareenka ee qofka si wanaagsan. Dadka qaba niyad-jabka, xanuunka dareemayaasha, waxaa lagama maarmaan ah in ay si joogto ah u qaadaan aromaterapy iyadoo la adeegsanayo saliida geranium. Waxay kordhisaa dhaqdhaqaaqa jireed, waxay yareysaa calaamadaha cadaadiska, baabi'iya nacayb.
Waxaa loo adeegsadaa kareemka jirka, labadaba warshadaha iyo abuurista dabiiciga ah ee qurxinta dabiiciga ah. Waa saliid caalami ah oo ku haboon labadaba dhallinta iyo maqaarka caadiga ah ee maqaarka ah. Waxay ku habboon tahay nooca maqaarka, si dhakhso ah ayuu u yareeyaa bararka, baabi'iya qasnadaynta. Saliida saliida ee saliida ah waxay dib u soo noolaanaysaa epidermis waxayna kicineysaa dib u soo kabashada.
Iyada oo ay sabab u tahay sifooyinka anti-bararka, waxaa lagu daraa halbeegga loogu talagalay daaweynta gubashada, jarista, iyo qabowga.
Waxay ka caawisaa la dagaalanka cellulite, waa qayb ka mid ah qalabka gaarka ah.
Waxay ka badbaadin doontaa kaneecada dabiiciga ah. Waxaa lagama maarmaan ah in biyaha lagu shubo dhalada buufinta iyo hoos u dhig 5-6 dhibcood oo saliida saliidda ah ee saliida leh, si fiican u rux. Meelaha furan ee jirka, timaha, dharka. Dhab ahaan waa wax aan dhib lahayn maqaarka iyo xitaa waxtar leh, laakiin kaneecada ayaa cabsiin doonta urta.
Kaliya diidmada ayaa ah in daaweynta dabiiciga ah aaney waqti dheer soconin, waxaad u baahan tahay inaad ku buufiso 20kii daqiiqo ee kasta, ma aha wax aad u fara badan, kaliya cusbooneysii urta cayayaanka. Laakiin kani waa kaneecada kaneecada oo ammaan ah oo aan lahayn kiimiko.
Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa neefsashada (ugu badnaan 2 dhibcood) iyo cadaadis.
Waxay ku caawin kartaa madax xanuunka, taas macnaheedu waa in yar oo saliida saliida ah (gabbaldayaha, geedka ololaha, kalluunka, miraha khudradda, jeermiska qumbaha) ku dar 1 dhibic oo saliid ah oo muhiim ah oo jilicsan oo si tartiib ah u xoqin.
Waa muhiim! Saliida saliida ee saliida ah waxay saameyn xooggan ku leedahay hormoonnada. Isticmaalkiisa qaab kasta wuxuu udub dhexaad u yahay haweenka uurka leh, iyo sidoo kale marka qaadashada uurqaadida. Sidoo kale waa mamnuuc carruurta ka yar 6 sano.
Laga soo bilaabo fiidiyowga waxaad baran doontaa isticmaalka saliida lagama maarmaanka u ah:
Guryaha laga soo saaro caafimaadka
Waxaa sidoo kale loo yaqaan 1,3-dimethylamine, ama DMMA, tan dheeraadka ah ee cuntada ayaa badanaa loo isticmaalaa cayaaraha iyo jir-dhiseyaasha ka hor tababarka.
Sanadkii 2014, waxaa lagu mamnuucay Hay'adda La-Dagaalanka Daawooyinka Ruushka. Daroogadu waxay keeneysaa koror xoog leh oo tamar badan iyo marar badanna waxay kordhiyaan diiradda.
Aad bay u fiican tahay miisaan lumis, laakiin waxaa lagu daraa jimicsiga jidhka iyo jimicsiyada gaarka ah, maadaama uu yahay dabiiciga dabiiciga ah ee dabiiciga ah.
Isboorti aan xirfad lahayn, waxaa la isticmaali karaa 1-1.5 saacadood ka hor tababarka xoogga, si loo xoojiyo maraakiibta dhiigga, cadaadiya kor u kaca iyo kicinta murqaha.
Kobcinta niyadda iyo hagaajinta xasuusta.
Kaararka DMMA kuma koobna karo khamriga, waxay keeni doontaa istaroog ama weerarka wadnaha.
Daawo video DMMA:
Marxaladaha hore, waxay daaweyn kartaa cataract. Waxaa lagu aasay dhowr indhaha dhowr jeer maalintii. Waxay si fiican u saartaa casaanka, waxay tirtiraysaa aragtida cakiran. Isku dar ah cabitaan casiir ah iyo biyo malab ah ayaa ka caawin doona caabuq indhaha.
Tani waa badbaado rasmi ah oo ku saabsan dheefshiidka. Waxaad u baahan tahay inaad qaadato 2 qaado oo caleemo ah oo ku shub laba koob oo biyo diirran la kariyey (ma kulul). Ku adkeyso ugu yaraan 8 saacadood. Dhibaatooyinka ba'an ee xanuunka caloosha ama mindhicirka, cab cabir ilaa 2 qaado oo kasta.
Dhibbane oo aan ku haysan karaa aqalka?
Sababtoo ah urta xooggan, warshadani waa xasaasiyad. Haddii ay jirto xaalad xumo, shuruudo laguma hayn karo guriga, haddii kale cawaaqibta waxay noqon kartaa bararka Quincke.
Sidoo kale, ma haysan kartid geraniums guriga haddii aysan jirin xasaasiyad, laakiin mid ka mid ah dadka degaanka uma dulqaadan karo urka caleemaha. Waxaa jira kiisas naadir ah marka ay dadka u hibayso, xitaa yaqyaqsi.
Tincture, decoctions ee caleemaha Geranium caleenta dhiigga, ma waxaa loo adeegsan karaa bukaanka qaba thrombophlebitis.
Uma isticmaali kartid saliida lagama maarmaanka ah ee geranium markaad qaadato daawooyinka dhiigga dhinta, haddii kale saamayntu waxay kordhinaysaa marar badan.
Soo-qabashada infusions gudaha waxaa laga mamnuucayaa bukaanka qaba xiidmaha.
Daryeelka dhirta gudaha
Xilliga xagaaga, kuleyl aad u daran, warshad waa in laga saaraa kolla kulul. Xilliga qaboobaha, waxaa lagu hayn karaa qol qabow iyo daaqadaha, laakiin heerkulku waa +12 digrii waa muhiim, haddii ay dhacdo, gorgoriyuhu wuu dhimanayaa.
Waxay u dulqaadaneysaa abaar ka wanaagsan tan biyaha ka badan, sababtoo ah waxaa la waraabiyey yar yar, laakiin 2-3 jeer toddobaadkii. Dhammaan qalajinta ciidda looma oggola.
Quudinta guga iyo xagaaga hal mar 2 asbuuc oo leh Bacriminta fosfooraska sare, iyaga ka dhig iyaga oo leh waraabka.
Dareen u yeelo! Quudinta oo leh diirada nitrogen ee sare lama isticmaali karo.
Waxa kale oo la bacrimiyey biyo yar oo iodine ah (1 dhibic oo ah iodine halkii litir oo biyo ah).
Dhowr jeer bishiiba waa lagama maarmaan in la daboolo lakabka ugu sareeya ee ciidda si loo helo oksijiin in ay gasho jiirarka.
Geranium wuxuu ku tallaalaa 2-3 sano oo kasta. Dharabyada caaga ah ma taagnaan karaan, geranium si fiican ayuu u kori doonaa dhoobada ama dhoobada.
Iska yaree dhererka 5-7 cm oo leh 2-3 caleemo.
Stiffen inta lagu jiro maalinta.
Ku rid qaybta la jarjaray ee dhuxusha la jajabiyey oo lagu beeray dhulka loogu talagalay geranium ama carrada fudud oo lagu qaso ciid.
Ka dib marka xididdadu muuqdaan, waxaa lagu beddelaa dheriga joogtada ah.
Eeg fiidiyowga ku saabsan sida loo dacaayado gooynta geranium:
Ku beer qoyan qoyan peat, caws iyo ciid (1: 1: 2).
Top ku rusheeyey lakabka carrada leh dhumucdiisuna 2 cm.
Ku shub xal yar oo casaan ah ee daloolka potassium.
Ku dabool muraayadda ama filimada, marin hawo 3-4 maalmood.
Seeds ayaa Giriig ah heerkulka qolka + + 18 °.
Ka dib 1.5-2 bilood, marka ay jiraan 2-3 caleemo run, waxaa lagu beeray dheriyo.
Marka ay jiraan 5-6 caleemo, qanjirada sare ugu jilceli si ay u kobcaan baadiyaha.
Laga soo bilaabo fiidiyowga waxaad baran doontaa sida loo beeray geranium:
Halkee iyo sidee baan u iibsan karaa?
Warshad waxaa laga iibsan karaa dukaamada ubaxa ee magaalo kasta. Ma khusayso marar dhif ah iyo had iyo jeerba iibka.
Waxaa jira dukaamo badan oo internetka ah oo iibiya dhirta qoyan ee dadka waaweyn, iyaga oo si ammaan ah u xiraya isla markaana hubinaya in shixnad ammaan ah. Laakiin xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad adeegsato adeegyo dhakhso ah iyo dalbasho magaalada ugu dhow, si ay dhirtu u fuushaan baakad aan wax ka badan hal maalin. Sidoo kale Abuurka Geranium waxaa laga dalban karaa internetka.
Badanaa, dhallinyarada iyo xitaa horay u-gooyaa geraniums waxaa laga iibsan karaa ayeeyooyinka iibiya dhirta dufan iyo bucaweelo laga soo bilaabo beerahooda.